Ogaden News Agency (ONA) – OYSU qaybta Yurub oo ka qayb galay siminaar lagu qabtay dalka Spain
OYSU qaybta Yurub oo ka qayb galay siminaar lagu qabtay dalka Spain
Wafti ka socda ururku OYSU-Europe ayaa ka qayb galay Siminaar balaadhan oy kasoo qayb galeen dhamaan ururada ku bohoobay dallada Xidhiidhka Ururada Dhaliyarada Afrika ee Yurub oo afka qalaad lagu yidhaahdo ADYNE (African Diaspora Youth Network in Europe). Siminaarka ayaa lagu qabtay magaalada Mollina ee dalka Spain.
Ururka OYSU-Europe ayaa ka mid ah ururada lagu martiqaaday simaanrkan oo ciiwaankiisu sanadkan ahaa Building From Within: A Seminar For Youth Leaders of the African Diaspora Living in Europe. Waxaa hogaaminaya waftigii ka socday ururka OYSU-Europe Mudane Cabdinaasir Cabdiuur Macalin.
Waxaa simiaarkan ka qayb qaatay dhalinyaro badan oo ka kala yimid ururo kala duwan oo matalaya shucuubta Africa ee ku dhaqan qaarada Yurub.
Wuxuu Mudane Cabdinaasir oo matalayay ururka OYSU-Europe ku soo bandhigay warbixin aad uqiimo badan oo ku saabsan Xasuuqa ka socda Ogadenya, warbixintan oo dhaqaajisay shucuurta iyo dareenka kasoo qayb galayaasha siminaarkan ayaa aad loogu bogay.
Waxaa kale oo mudanuhu oo ka hadlay waxqabadka OYSU-Europeiyo shaqooyinka ay OYSU u qabato halganka shacabka Ogadenya.
Dhanka kale waxay siwadajir ah uga wada qaybgaleen ururka ADYNE iyo da’yar farobadan oo kakala yimid ururada aduunka oo idil, sida ururada udooda Xuquuqda Aadamaha iyo kuwo kaloo badan siminaarkan oo lagu qabtay CEULJ (Center for Eurolatinoamericano De Juventud).
Waftigii ka socday OYSU-Europe ayaa ka qayb galay waraysiyo iyo doodo farabadan oo kusaabsan guud ahaan shucuubta Africa gaar ahaan Ogadenya xasuuqa kasocda, halkaas waxay dhalinyaro faro badan kubarteen qadiyada Ogadenya oo ahayd ujeedada ugu wayn ee waftiga OYSU ay uga qaybgalaan kulamada noocan oo kale ah si beesha caalamka loogaadhsiiyo gumaad ba,an ee kasocda Ogadenya.